U-Alex Khvoynitskaya's Articles on Martech Zone |
Imibhalo nge Alex Khvoynitskaya
U-Val Kelmuts uyiSikhulu Esiphezulu kanye Nomsunguli Kwa- Staylime, inkampani ye-ecommerce design and development ekomkhulu eRedwood City, California. Uneminyaka engu-10 yokuhlangenwe nakho kokuthuthukiswa kwesofthiwe yangokwezifiso, ukuphathwa kokuthengisa, nokuthuthukiswa kwebhizinisi. U-Val uchwepheshe ogunyaziwe wokuthengisa we-Adobe Commerce, uchwepheshe oqinisekisiwe webhizinisi wakwaShopify, kanye nelungu le-PMI.
Umhlahlandlela Osheshayo Wokudala Imithetho Yenqola Yokuthenga ku-Adobe Commerce (Magento)
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 22, i-2022 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 22, i-2022 Alex Khvoynitskaya
Ukudala ukuzizwisa kokuthenga okungenakuqhathaniswa kuwumgomo oyinhloko wanoma yimuphi umnikazi webhizinisi le-ecommerce. Ekuphishekeleni ukugeleza okuqhubekayo kwamakhasimende, abathengisi bathula izinzuzo zokuthenga ezihlukahlukene, njengezaphulelo namaphromoshini, ukuze benze ukuthenga kwanelise nakakhulu. Enye yezindlela ezingenzeka zokufeza lokhu ngokudala imithetho yenqola yokuthenga. Sihlanganise umhlahlandlela wokudala imithetho yenqola yokuthenga ku-Adobe Commerce (ngaphambili eyayaziwa ngokuthi i-Magento) ukuze ikusize wenze isistimu yakho yesaphulelo